Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo maanta kulmaya – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in maanta magaalada Mogadishu ay ku kulmayaan Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddiga ayaa qodobada ay ka hadli doonaan waxaa kamid ah xilliga rasmiga ah ee uu furmayo Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka iyo waqtiga Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Yareey ay hor imaan doonto Baarlamaanka.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Yareey ayaa waxaa lagu waday in 27-ka bishan May ay hor-tagto Baarlamaanka, hayeeshee waxaa dib-u-dhigay xirnaanshaha Baarlamaanka sababo la xiriira cudurka COVID-19.
Kulamada Baarlamaanka ayaa markii ugu horeysay xildhibaannada ay uga qeyb-gelli doonaan kulanka adeegga internet-ka ee maqal iyo muuqaalka ah.
kalfadhiga ayaa lagu waday in la furo 20-kii bisha April balse waxaa dib loogu dhigay xanuunka COVID-19 iyo guddoonka labada Aqal oo dalka dibadiisa ku xayirnaa.